अफ्ताव आलमका भाई भन्छन्, ‘पटाका पड्केको हुन सक्छ मान्छेले त्यसैलाई बम भनिदिए’ – Everest Dainik – News from Nepal
अफ्ताव आलमका भाई भन्छन्, ‘पटाका पड्केको हुन सक्छ मान्छेले त्यसैलाई बम भनिदिए’
मोहम्मद सकिल अख्तर, अफ्ताव आलमका भाइ (काकाको छोरा) तथा राजपुर नगरपालिकाका मेयर ।
सरुहट्ठा राजपुरबाट पाँच किलोमिटर टाढा छ । त्यहाँको मान्छे कसरी प्रत्यक्षदर्शी हुन सक्छ ?
यो सबै षड्यन्त्र हो । राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न यसो गरिएको हो । अफ्ताव आलमको लोकप्रियता सक्न यसो गरिएको हो ।
विस्फोट नै भएको छैन भने कसरी टहराको छानो र भित्ता परिवर्तन हुन्छ । त्यो पहिले जस्तो थियो, अहिले पनि उस्तै छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सबै झुट हो । त्यसमा राजनीतिक षड्यन्त्र छ । इन्सेक, आयोग र बार पनि आलमविरुद्धकै षड्यन्त्रमा लागे होलान् त ? यसो गर्दा उनीहरूलाई के लाभ होला र ? षड्यन्त्र भएकै हो । त्यसैले प्रतिवेदन बन्यो । यसमा उनीहरूलाई के लाभ छ त्यो म कसरी भनौँ ?
यसमा यस्तो छ– उहाँहरूले जाहेरी दिनुभयो, मुद्दा अदालतमा पुग्यो, तर प्रमाण नपुगेर खारेज भयो । प्रमाण पुगेको भए त मुद्दा चलिहाल्थ्यो नि । जिल्ला अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र पुनरावेदनले खारेज गर्यो, ठीक गर्यो । अब सर्वोच्चले किन उल्टायो, के भन्न सकिन्छ र ? मलाई शंका छ, सर्वोच्च प्रभावित भयो ।
त्यही भएर हामी चुप लागेर बसेको हो । हामी पनि चाहन्छौँ अनुसन्धान होस् । त्यसपछि उहाँले सफाइ पाउनुहुन्छ । तर, अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ । षड्यन्त्र मिसियो भने हाम्रो विरोध रहन्छ । अनुसन्धानमा सघाउन हामी तयार छौँ । उहाँ पनि तयार हुनुहुन्छ । यो अन्तर्वार्ता आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
ट्याग्स: अफ्ताव आलम, मोहम्मद सकिल अख्तर, राजपुर नगरपालिका